प्रदेश नं. ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे – Clickmandu
प्रदेश नं. ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक १ गते १८:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं ।आम जनताको वित्तीय पहुँचमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थापित सात प्रदेश मध्ये प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा ‘गाँउ–गाँउमा सिंहदरबार’ को नारा दिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लगायतका राजनीतिक दलले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्न सहजीकरण गरेका छन् ।
बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ को कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशको एक स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं २ को १३६ स्थानीय तहमध्ये १३४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् ।
सो प्रदेशका दुई स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना हुन बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं ३ को पनि दुई स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । सो प्रदेशका कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ५५ हजार ६२ जनसङ्ख्यालाई कूल ३५४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले सेवा दिएका छन् । प्रतिशाखा जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल चार हजार ९५८ जनालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिमका चार हजार ४०९ जनालाई एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले सेवा दिएको छ ।
सो प्रदेशका वित्तीय संस्थाका शाखा सङ्ख्या ६४७ रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको प्रदेशगत तथ्याङ्कको हिस्साका आधारमा केन्द्रीय बैंकले प्रतिशाखा बराबरको जनसङ्ख्याको अनुपात निकालेको हो ।
सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा प्रदेश नं ३ मा छ । सो प्रदेशमा दुई हजार २३१ बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्था क्रियाशील छन् । प्रतिशाखाले दुई हजार ७७० जनालाई सेवा दिएको छ ।
प्रदेश नं १ मा तीन हजार ४८१ जनालाई एउटा शाखाले सेवा दिँदा प्रदेश नं २ मा चार हजार ९३८, गण्डकीका दुई हजार २५७ जनाले एक शाखाबाट सेवा पाएका छन् । प्रदेश नं ५ का दुई हजार ९५१ जनाले प्रतिशाखाका दरले सेवा पाएका छन् । रासस